Samsung yakachinjisa iyo Galaxy S20 akateedzera kumusoro giya. Takave nekuwedzeredzwa kumagumo epamusoro ne S20 Ultra - foni yepamusoro-soro, yakagara padivi peGPS S20 uye iyo Galaxy S20 + - ine iyo S20 FE pamagumo anodhura.
Asi pane zvakawanda zvekusvika pakubata nazvo: Samsung inopa zvimwe zvinhu kupfuura chero ani zvake kunze kwebhokisi, saka zviri nyore kukanganwa kana kusambowana mamwe ematombo akavanzika. Isu takabvarura nharembozha kuti tibatanidze pamwe gwara rezvinhu zvese zvichaitwa neako S20 mudziyo uye nemabatiro aungaite. NeIni UI 3.0 uye Android 11 kugadzirisa pane shanduko - uye ese maS20 zvishandiso anofanirwa kuve neiyo nyowani software.
Samsung Galaxy S20 FE, S20 +, S20 Ultra kumba skrini matipi
Chikamu chekuvharira pamba chikamu chekutanga. Ndiko kwaunovhurira foni yako, iyo nzvimbo yezvishoma mapurogiramu nemajeti uye ndipo paunodzoka kana wapedza kuita chimwe chinhu muapp. Zvino kutsigira Android 11, unogona zvakare kusarudza yako yekushambadzira maitiro.
Vhura Android 11 gesture navigation: Nekutadza iyo S20 ichapa Samsung matatu matatu ma icon ekufamba. Kana iwe uchida kuchinjira kuApple 11's gestures yakavhurika marongero> kuratidza> yekufambisa bar. Pano iwe une sarudzo yemabhatani kana swipe mitezo. Unogona kubaya pane "zvimwe zvingasarudzwa" kuti ushandise, asi nekutsveta zvimiro foni yako inozokurega uchitsvedza kubva kudivi kuti udzokere, kumusoro kubva pasi kuenda kumba, kungofanana nemamwe madivayiri eApple.
Shandura launcher (imba yechidzitiro): Iwe unogona kushandura zviri nyore ruzivo rwefoni yako nechimwe chakatangisa, senge Nova, kana iwe uchida zvimwe zvigadziriso. Ingo dhawunirodha Launcher kubva kuGoogle Store woiisa. Kana iwe ukadzvanya bhatani repamba iwe unozopihwa sarudzo yekusarudza nyowani default launcher. Kana, tungamira muzvirongwa> maapuro uye rova ​​bhatani remenyu kumusoro kurudyi. Sarudza "default apps" uyezve "kumba app". Iwe uchaona yako sarudzo yeanofambisa ipapo, sarudza iyo iwe yaunoda. Ongorora: kana iwe uri kushandisa Android 10 / 11's gesture navigation, izvi hazvitsigirwe neese echitatu-bato maruneti, saka ungatofanira kudzoka kushandisa matatu mabhatani ekudzora.
Ratidza mazano eappu mumaapps apfuura. Paunobaya bhatani rezvazvino reapplication, kana zvishoma nezvishoma swipe kumusoro kana uri kushandisa Android 11 maekisesaizi, iwe unowana zvigunwe zvemapeji ako eazvino eapp, asi zvakare mutsetse wemapurogiramu akapihwa pasi pazasi. Izvi zvinoenderana nezvinoonekwa neGPS S20 zvaungangoda zvichienderana nemaapps achangobva kushandiswa. Kana iwe usiri kuda izvi, saka vhura menyu kumusoro kurudyi mubhawa rekutsvaga uye kudzima "dzakarongedzwa maapplication".
Svika Google Mubatsiri: Iyo refu yekutsikirira pane chaipo pa-screen imba bhatani ichavhura Google Mubatsiri. Iwe unogona ipapo kutaura kuGoogle uye uwane ruzivo rwakazara seMountain View yakatarwa. Izvi zvinowirirana neakaundi yako yeGoogle kubva kusaina-kupinda, saka inoshanda nechinhu chero chawakatomisikidza Google Mubatsiri kuti uite. Kana iwe uri kushandisa Android 11 gestures, swipe diagonally mukati kubva kukona yepasi kuvhura Mubatsiri.
Engage 120Hz maitiro: Iko kune sarudzo ye120Hz kana 60Hz paS20. Musoro muzvirongwa> kuratidza> kufamba kwakanaka. Izvi zvinokutendera kuti utore kubva "kumusoro" kana "standard", iine 120Hz ine chinangwa chekuita kuti zvinhu zvinyatsonaka. Inongowanikwa chete pa Full HD + resolution (zvakare yakasarudzika), asi zvakare inoshandisa upenyu hwakawanda hwebhatiri pane kunamatira ku60Hz.
Shandura iyo resolution resolution: "Quad HD +" ivo vanodaro, asi default iri "Yakazara HD +". Iwe unogona kusarudza iyo resolution yaunoda iyo yekuratidzira mune zvigadziriso> kuratidza> resolution yechiso. Kugadziriswa kwepazasi kunogona kukusevha bhatiri simba. Iko hakuna sarudzo yekuchinja resolution paS20 FE.
Batidza 8K vhidhiyo yekutora (S20, S20 + uye Ultra chete): Kana iwe uchida kutora vhidhiyo mune yakanyanya resolution, tungamira muvhidhiyo modhi uye tinya iyo factor ratio icon - iwe uchaona sarudzo ye16: 9 8K. Iwe unorasikirwa nezvimwe maficha pane ino resolution - hapana epamberi maficha, ingori 8K kubatwa.
Iyo Galaxy S20, S20 + uye S20 Ultra ine mabhatiri makuru - 4000mAh, 4500mAh uye 5000mAh zvichiteerana - nepo S20 FE iinewo bhatiri re4500mAh. Asi ivo zvakare vanopisa kuburikidza navo nekukurumidza. Heano maitiro ekuwana zvakanyanya kubva kwavari.